Thursday, 10 Jan, 2019 9:25 AM
तर यी स्मार्टफोनले हामी को हौँ भन्ने बारे के भन्छन् ?
तपाईँको व्यक्तित्व र स्मार्टफोन बिचको सम्बन्ध पत्ता लगाउने यो पहिलो अध्ययन हो। र, उनीहरूले के पाए भन्दा हाम्रो रोजाईको स्मार्टफोनले हाम्रो व्यक्तित्व बारे केही महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन्छ।
उदाहरणका लागि, आइफोन प्रयोगकर्ताको तुलनामा एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ता धेरै ईमान्दार हुन्छन्। तर आइफोन प्रयोगकर्ताहरू एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताको तुलनामा जवान अनि खुला विचारका देखिएका छन्। अध्ययन ले के पायो भने पुरुषको तुलनामा महिलाहरूले आइफोन खरिद गर्नसक्ने सम्भावना लगभग दोब्बर देखिएको छ। तर, यस्तो किन त भन्नेबारे भने केहिपनि स्थापित हुन सकेको छैन।
अर्को तर्फ, एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ता भने अधबैँसे पुरुष हुने सम्भावना बढी रहन्छ। तर स्मार्टफोनको रोजाई र मानिसको व्यक्तित्वबीच सम्बन्ध किन हुन सक्छ ? शोधकर्ताहरू यसलाई व्यक्तिले आफ्ना रुचि बेरुचिका विषयमा आफ्नो छनौट प्रस्तुत गरेर आफूलाई खुला रुपमा अभिव्यक्त हुन दिने प्रकृयासँग जोडेर हेर्न चाहन्छन्।
ूस्मार्टफोन प्रयोगकर्ताहरूको फोन बढ्दो रूपमा तिनीहरू स्वयं कै सानो डिजिटल संस्करण बन्दैछ भन्ने स्पष्ट हुँदैछ,ुु उक्त अध्ययनको सहलेखक हेदर श भन्छिन्। ूहामीमध्ये धेरैलाई आफ्नो फोन अरूले प्रयोग गर्ने प्रयास गरेको मन पर्दैन किनकि उक्त फोनले हाम्रो बारे धेरै कुरा खोलिदिन सक्छ।
तपाईँको व्यक्तित्व र स्मार्टफोन बिचको सम्बन्ध पत्ता लगाउने यो पहिलो अध्ययन हो। आइफोन प्रयोग गर्नेहरू एन्ड्रोइड प्रयोगकर्ताको तुलनामा बढी समृद्ध हुँदैनन् भन्ने कुरा अध्ययनले देखाउँछ। तर आइफोन प्रयोगकर्ताहरू भने आफूले उपयोग गर्ने स्मार्टफोनलाई बढ्दो रूपमा आर्थिक हैसियत जनाउने बस्तु स्टेटस अब्जेक्टु को रूपमा हेरिने कुरा बाट चिन्तित छन्।
ुुमानिसहरूलाई केही प्रश्न गरेपछि उनीहरूको खल्तीमा कुन फोन छ भन्ने कुरा करिब ७० प्रतिशतसम्म मिल्ने गरी अनुमान गर्न सक्ने सांख्यिकीय मोडल बनाउन हामी सफल भयौँ,ुु सिनेटसँगको अन्तरवार्तामा अनुसन्धानकर्ता डेभिड एलिसले बताए।
ुडेटाु को गोपनीयताबारेको बहसले गति लिइरहँदा, एलिस र उनको समूहले के निष्कर्ष निकालेको छ भने कुनै पनि व्यक्तिबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नु परे ु ति व्यक्तिले प्रयोग गर्ने स्मार्टफोनको अपरेटिङ सिस्टम जस्तो सरल चिजु बाटै सम्भव छ। बीबीसी